Shiinaha Sida loo qaabeeyo qaybo balaastig ah Soo-saare iyo Badeecad | Meesha
Ku naqshadeyso qaybo caag ahwaa in la qeexo qaabka, cabirka iyo saxsanaanta qaybaha, iyadoo lagu saleynayo doorka ay qeybahu ku ciyaarayaan sheyga, iyo qaanuunka habka wax u sameynta ee balaastigga ah. Soosaarka ugu dambeeya waa sawiro loogu talagalay soosaarida caaryada iyo qeybta balaastigga ah.
Soosaarka badeecadu wuxuu ka bilaabmaa qaabeynta. Naqshadeynta qaybaha balaastigga waxay si toos ah u go'aamisaa xaqiijinta qaabdhismeedka gudaha, qiimaha iyo shaqada sheyga, sidoo kale waxay go'aamisaa tallaabada xigta ee wax soo saarka caaryada, kharashka iyo wareegga, iyo sidoo kale cirbadeynta cirbadeynta iyo geedi socodka wax soo saarka iyo qiimaha.
Qaybaha balaastigga ah waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa alaabooyin kala duwan, tas-hiilaad iyo nolosha dadka ee bulshada casriga ah. Qaybaha caaga ah waxay u baahan yihiin qaabab iyo shaqooyin kala duwan. Waxay isticmaalaan alaabada balaastigga ah guryaha ay degan yihiin way kala duwan yihiin. Isla mar ahaantaana, waxaa jira siyaabo badan oo loogu sameeyo qaybo caag ah warshadaha. Markaa in la naqshadeeyo qaybo caag ah ma aha shaqo fudud.
Naqshadeynta qaybaha kala duwan iyo walxaha ayaa la soo saaray habeyn kala duwan. Wax soosaarka loogu talagalay balaastigga balaastika badanaa waxaa ka mid ah hoos:
1. duro duritaanka
2.laabashada wax taaj oo kale
3.com wax ka beddelidda muuqaalka
4. qaabaynta xubinta taranka
Waxaa jira siyaabo fara badan oo wax loogu soo saaro. Wax taaj oo kale duray waa habka wax soo saarka caan ah, maxaa yeelay irbad la mideeyey 50% ~ 60% qaybo caag ah waxaa soo saaray wax taaj oo kale duray byb, waa awood wax soo saarka-xawaare sare.
Muuji kiiska qaybo caag ah oo aan qorsheynay:
Xirmada caaga ah ee taleefanka aragga
Qaybaha caaga ah ee farsamada
Kiisaska caaga ah ee elektaroonig ah
Guryaha caaga ah ee qalabka
Hoos waxaan ku wadaagnaa faahfaahin sida loo qaabeeyo qaybo balaastig ah oo saddex dhinac ah
* 10 talooyin oo loogu talagalay naqshadeynta qaybaha balaastigga ah waa inaad ogaataa
1.Qeex qaabeynta muuqaalka iyo cabirka sheyga.
Tani waa tallaabada ugu horreysa ee nidaamka naqshadeynta oo dhan. Marka loo eego cilmi-baarista suuqa iyo shuruudaha macaamiisha, go'aaminta muuqaalka iyo shaqada alaabooyinka, iyo sameynta howlaha horumarinta wax soo saarka.
Marka loo eego hawsha horumarinta, kooxda horumarintu waxay fuliyaan falanqaynta suurtagalnimada farsamo iyo farsamo ee badeecada, waxayna dhisaan qaabka muuqaalka 3D ee badeecada. Kadib, marka loo eego garashada shaqada iyo isku imaatinka alaabada, qaybo suurtagal ah ayaa la qorsheeyay.
Kala saar qaybaha shakhsiga ah ee sawirada wax soo saarka, dooro nooca cusbi caaga ah ee qaybaha balaastigga ah
Tallaabadani waa in laga sooco qaybaha ka soo baxa nooca 3D ee lagu helay tillaabadii hore loona qaabeeyo shaqsi ahaan. Marka loo eego shuruudaha shaqada ee qaybaha, dooro alaabada ceeriin ee caaga ku habboon ama qalabka qalabka. Tusaale ahaan, ABS waxaa badanaa loo isticmaalaa
qolof, ABS / BC ama PC ayaa looga baahan yahay inay lahaadaan aalado farsamo oo gaar ah, qaybo hufan sida laambadhka, laambadda dhalada ee PMMA ama PC, qalab ama xidho qaybo ka mid ah POM ama Nylon.
Ka dib markaad doorato maaddada qaybaha, naqshadda faahfaahinta waa la bilaabi karaa.
3.Qeex xaglaha qabyada ah
Xaglo xagal ah ayaa u oggolaanaya in caagga laga saaro caaryada. Iyadoo aan lahayn xaglo qabyo ah, qaybku wuxuu bixin doonaa iska caabin weyn sababtoo ah khilaaf inta lagu jiro ka saarista. Xaglaha qabyada ah waa inay joogaan gudaha iyo dibedda qaybta. Inta qoto dheer ee qaybta, ayaa sii weynaanaya xagasha qabyada. Xeerka suulka fudud ayaa ah inuu lahaado 1 darajo xagal qabow halkii inch. La'aanta xagal qabyo ah oo ku filan waxay sababi kartaa xoqid dhinacyada dhinacyada iyo / ama calaamado badan oo ejector ah (inbadan oo dambe).
Xaglo xagal ah oo dusha ka baxsan: Qaybta qotada dheer, ayaa sii weynaaneysa xagasha qabyada ah. Xeerka suulka fudud ayaa ah inuu lahaado 1 darajo xagal qabow halkii inch. La'aanta xagal qabyo ah oo ku filan waxay sababi kartaa xoqid dhinacyada dhinacyada iyo / ama calaamado badan oo ejector ah (inbadan oo dambe).
Badanaa, si loo helo dusha muuqaal wanaagsan, dusha sare ayaa lagu sameeyaa dusha sare ee qaybaha. Darbiga leh qaabdhismeedka ayaa ah mid qallafsan, khilaafku waa weyn yahay, mana fududa in laga saaro daloolka, sidaas darteed waxay u baahan tahay xagal sawir weyn. Dareenka ugu hooseeya waa, xagasha qorista weyn ee loo baahan yahay.
4.Define dhumucda derbiga / dhumucdiisuna midaysan
Qaab-dhismeedka adag ee adag looma rabo duritaanka duritaanka sababo soo socda awgood:
1). Waqtiga qaboojinta waa mid u dhigma laba jibbaaran dhumucda derbiga. Waqtiga qaboojinta dheer ee adag ayaa ka adkaan doona dhaqaalaha wax soo saarka ballaaran. (dariiqa liita ee kuleylka)
2). Qaybaha adag ayaa ka sii yaraanaya qaybta khafiifka ah, taas oo ku soo bandhigaysa hoos u dhigista kaladuwan ee keenta bogga ama sumadda saxanka iwm (astaamaha hoos u dhigista caagagga iyo astaamaha pvT)
Sidaa darteed waxaan u leenahay sharci aasaasi ah naqshadeynta qeyb caag ah; illaa inta suurtogalka ah dhumucda derbigu waa inay ahaataa mid isku mid ah ama joogto ah iyada oo loo marayo qaybta. Dhumucdiisuna waxay la yiraahdaa dhumucda darbiga magacaaban.
Haddii ay jirto qayb adag oo ka mid ah qaybta, waa in laga dhigaa meel bannaan iyadoo la soo bandhigayo xudunta. Tani waa inay hubisaa in dhumucda gidaarka oo isku mid ah ay ku wareegsan tahay xudunta.
3) .Waa maxay tixgalinta go'aaminta dhumucda derbiga?
Waa inuu ahaadaa mid qaro weyn oo adag oo shaqada ku filan. Dhumucda darbiga waxay noqon kartaa 0.5 illaa 5mm.
Sidoo kale waa inay ahaataa mid dhuuban oo si dhakhso leh u qaboojiya, taasoo keenta miisaanka qaybta hoose iyo wax soo saar sareeya.
Kala duwanaansho kasta oo ku yimaada dhumucda darbiga waa in lagu hayaa sida ugu yar ee suurtogalka ah.
Qeyb balaastig ah oo leh dhumucda darbiga ee kaladuwan waxay la kulmi doontaa heerar kala qaboojin kala duwan iyo yaraansho kala duwan. Xaaladda noocaas ah marka la gaaro dulqaad aad u dhow ayaa noqda mid aad u adag oo marar badan aan macquul ahayn. Meesha ay muhiim tahay kala duwanaanta dhumucda darbiga, kala-guurka labada u dhexeeya waa inuu ahaadaa mid tartiib tartiib ah.
Naqshadaynta isku xidhka qaybaha
Caadi ahaan waxaan u baahanahay inaan isku xirno laba qolof. In la sameeyo qol ku lifaaqan dhexdooda si loo meeleeyo qaybaha gudaha (isku xirka PCB ama farsamo).
Noocyada caadiga ah ee isku xirnaanta:
1). Qabatooyin Snap:
Isku xirnaanta xargaha jillaabyada waxaa badanaa loo isticmaalaa alaabooyinka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Astaamihiisu waa in qabatooyin snap ah guud ahaan lagu dejiyo cidhifka qaybaha, cabbirka badeecadana laga dhigi karo mid yar. Markii la ururiyo, si toos ah ayaa loo xidhayaa iyada oo aan la adeegsan wax qalab ah sida kaashawiishka, alxanka Xiinka oo dhinta iyo kuwo kale. Faa'iido darrada ayaa ah in qabatooyinka snap-ka ay sababi karaan caaryada oo aad u dhib badan. Farsamaynta tidcan iyo qalabka wiishka ayaa loo baahan yahay si loo xaqiijiyo isku-xidhka qabatooyinka iyo kor u qaadista qiimaha caaryada.
2). Fur kala-goysyada:
Kala-goysyada isku xira waa mid adag oo lagu kalsoonaan karo. Gaar ahaan, furka + hagaajinta lowska waa mid aad loogu kalsoonaan karo oo adkeysi leh, taasoo u oggolaaneysa kala-goysyo badan oo aan dillaacin. Isku xirka furku wuxuu ku habboon yahay alaabooyinka leh quful xoog leh iyo kala furfuris badan. Faa'iido darrada ayaa ah in khaanadda daboolka ay qaadato meel bannaan.
3). Maamulayaasha sii kordhaya:
Kordhinta madax isku xidhka ayaa ah in lagu hagaajiyo laba qaybood isku xidhka adag ee u dhexeeya madaxda iyo godadka. Qaabkan isku xirnaanta ma aha mid xoogan oo u oggolaanaya alaabada kala-goynta. Faa’iido darrada ayaa ah in qufulka qufulku uu yaraan doono maadaama waqtiga kala-baxa uu kordhayo.
4). Alxanka Xiinka:
Xiinka alxanka ayaa ah iyadoo labada qaybood la gelinayo caaryada Xiinka iyo isku darka dusha lagala xiriiro ee hoos imanaya tallaabada mashiinka alxanka ultrasonic. Cabbirka badeecaddu wuu yaraan karaa, caaryada cirbadaha ayaa iska fudud, xiriirkooduna waa adag yahay. Khasaaruhu waa adeegsiga caaryada ultrasonic iyo mashiinka alxanka ultrasonic, cabirka badeecada ma noqon karo mid aad u ballaaran. Kala daadinta ka dib, qaybaha ultrasonic mar labaad looma isticmaali karo.
Dharka jimicsiga waa waxyaabo farageliya ka saarista midkood caaryada qeybteeda ah. Dharka dharka laga jaro ayaa ka muuqan kara meel kasta oo ka mid ah nashqadda. Kuwani waa sida aan la aqbali karin, haddii aysan ka sii darnayn la'aanta xagal qabyo ah oo dhinaca ah. Si kastaba ha noqotee, hoosaadka qaarkood waa lagama maarmaan iyo / ama lama huraan. Xaaladahaas, waa lagama maarmaan
gunta hoose waxaa lagu soo saaraa iyadoo lagu riixayo / lagu dhaqaaqayo qaybaha caaryada.
Maskaxda ku hay in abuurista hoosta ay ka qaalisan tahay marka la soo saarayo caaryada waana in ugu yaraan la hayaa.
7. Taageer Feeraha / Gussets
Feeraha qeybta caaggu waxay hagaajinayaan qallafsanaanta (xiriirka ka dhexeeya culeyska iyo leexashada qeybta) qeybta wuxuuna kordhiyaa adkaanta. Waxa kale oo ay kordhisaa kartida-caaryada maadaama ay dhaqaajiyaan qulqulka socodka jihada feeraha.
Feeradaha waxaa lagu dhejiyaa jihada culeyska ugu badan iyo leexashada dusha sare ee muuqaalka qaybta. Ballaarinta caaryada, yaraynta iyo ka saarida ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara go'aannada meeleynta feeraha.
Feeradaha aan ku soo biirin darbiga taagan waa inaysan ku dhicin si lama filaan ah. U gudubka tartiib tartiib ah ee darbiga magacaaban waa inuu yareeyaa halista isku-buuqsanaanta.
Feeraha - cabirka
Feeraha waa inay lahaadaan cabirro soo socda.
Dhumucda feeraha waa inay udhaxeysa 0.5 ilaa 0.6 jeer dhumucda darbiga magacaaban si looga fogaado calaamadda saxanka.
Dhererka feeraha waa inuu ahaadaa 2.5 ilaa 3 jeer dhumucda darbiga magacaaban.
Feeraha waa inuu lahaadaa xagasha qaboojiyaha 0.5 illaa 1.5-degree si loo fududeeyo soo saarista.
Saldhiga feeraha waa inuu lahaadaa gacan ka hooseysa 0.25 ilaa 0.4 jeer dhumucda darbiga magacaaban.
Fogaanta udhaxeysa labada feeraha waa inay ahaataa 2 ilaa 3 jeer (ama ka badan) dhumuc magac darbi ah.
8. Geesyo shucaac ah
Markay laba lakab kulmaan, waxay samaysaa gees. Xagga geeska, dhumucda darbigu waxay kordheysaa 1.4 jeer dhumucda magaca derbiga. Tani waxay keeneysaa yaraanshaha kala-duwanaanta iyo isku-buuqa ku jira iyo waqtiga qaboojinta oo dheer. Sidaa darteed, halista guuldarada adeeggu waxay ku kordheysaa geesaha fiiqan.
Si loo xaliyo dhibaatadan, geesaha waa in lagu sifeeyaa radius. Radius waa in lagu bixiyaa dibedda iyo sidoo kale gudaha. Weligaa ha yeelan gees gees fiiqan maadaama ay kor u qaadeyso dildilaaca. Radius waa inuu noqdaa mid ay ku xaqiijinayaan sharciga dhumucda derbiga joogtada ah. Waxaa la doorbidaa in lagu yeesho gacan ka mid ah 0.6 ilaa 0.75 jeer dhumucda darbiga geesaha. Weligaa ha yeelan gees gees fiiqan maadaama ay kor u qaadeyso dildilaaca.
Naqshadeynta naqshadaha madaxa
Waxaan had iyo jeer u isticmaalnaa boolal si aan u wada hagaajino laba kiis oo nus ah, ama ku dhajinno PCBA ama qaybaha kale qaybaha balaastigga ah. Sidaa darteed madaxda furku waa qaab-dhismeedka wax lagu dhejiyo oo lagu hagaajiyo qaybaha.
Madaxa furku waa qaab qaabeeyayaal ah. Maamulaha waxaa laga yaabaa inuu salka ku hayo qeybta hooyada ama waxaa ku xirnaan kara dhinac. Isku xirnaanshaha dhinaca waxaa laga yaabaa inay keento qeyb balaaran oo balaastig ah, taas oo aan aheyn wax la jeclaan karo maadaama ay sababi karto sumadda saxanka iyo kordhinta waqtiga qaboojinta. Dhibaatadan waxaa lagu xallin karaa iyadoo lagu xiro madaxa feeraha dhinaca derbiga sida ku cad sawirka. Boss waxaa lagu sameyn karaa mid adag iyadoo la siinayo feeraha badhida.
Ku marooji waxaa loo isticmaalaa on Tababaraha inuu ku dhejiyo qayb kale. Waxaa jira nooc sameysmaya noocyo boolal ah iyo boolal lagu gooyo oo lagu riixo. Mawjadaha sameysmaya dunta ayaa loo isticmaalaa on thermoplastics iyo boolal goynta thread waxaa loo isticmaalaa on qaybo caag thermoset inelastic.
Mawjadaha sameysmaya boolal waxay soo saaraan xarig dhedig ah oo ku yaal gidaarka gudaha ee madaxa qulqulka qulqulka - balaastigga ayaa ku habboon degaanka halkii la gooyn lahaa.
Maamulaha furku waa inuu cabirkiisu habboon yahay si uu u adkeysto xoogagga gelinta qalabka iyo culeyska la saarayo furitaanka adeegga.
Baaxadda ceelka qaraabada ee furku waa mid muhiim u ah iska caabbinta xarigga xargaha iyo fur fur.
Dhexdhexaadiyaha sare ee Boss waa inuu ahaadaa mid ballaaran oo u babac dhigaya cadaadiska hoop-ka ee sababa dunta sameynta.
Bore wuxuu leeyahay dhexroor waxyar ka weyn albaabka gelitaanka oo dherer gaaban ah. Tani waxay gacan ka geysaneysaa helitaanka fur ka hor intaadan baabuurka wadin. Waxay kaloo yareyneysaa isku buuqa dhamaadka madaxa.
Soosaarayaasha Polymer waxay bixiyaan tilmaamo lagu ogaanayo cabirka maamulaha qalabkooda. Soosaarayaasha furku waxay sidoo kale bixiyaan tilmaamo ku saabsan cabirka saxda ah ee fur.
Waa in taxaddar la muujiyaa si loo hubiyo kala-goysyada alxanka ee xoogga leh ee ku wareegsan meertada madaxa.
Waa in taxaddar la sameeyaa si looga fogaado walaaca isku-buuqsan ee ku dhaca maskaxda maadaama ay ku guuldareysan karto jawiga gardarrada ah.
Caajis caajis waa inuu ka qoto dheer yahay moolka dunta.
10. Qurxinta dusha sare
Mararka qaarkood, si aan u helno muuqaal-muuqaal qurxoon, waxaan inta badan ku daaweynaa dusha sare ee kiiska caagga ah.
Sida: Dareenka, dhalaalka dhalaalaya, rinjiyeynta buufin, xardhashada leysarka, shaabad kulul, electroplating iyo wixii la mid ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo naqshadeynta badeecada horay loo sii wado, si looga fogaado howsha xigta ee aan lagu guuleysan karin ama cabirka isbeddelada saameynaya shirarka wax soo saarka.
Hore: Qaab samaynta
Xiga: Ku dhinta wasakhahaasi
Soo-saarka Nooca Caaga ah
Qaybaha caaga ah ee noocooda ah
Wax taaj oo kale duritaanka caaga noocooda